‘क्यान्सर भयानक रोग होइन’- स्वास्थ्य - कान्तिपुर समाचार
‘क्यान्सर भयानक रोग होइन’
माघ २१, २०७६ फातिमा बानु
सुर्खेतका पाँच वर्षीय बालक एक वर्षअघि खाटबाट लडेर घाइते भए । नजिकैको अस्पतालमा एक्सरे गर्दा घाँटीमुनिको हड्डी फुस्किएको रिपोर्ट आयो । लडेको दिनदेखि नै उनमा कडा ज्वरो आइरहने समस्या देखियो । ‘औषधि खाएको २ घण्टाजति खेल्थ्यो, फेरि उस्तै,’ उनकी आमाले भनिन् ।
हड्डीको समस्या निको भए पनि महिनौंसम्म ज्वरो नघटेपछि रगत जाँच गरियो । रिपोर्टपछि क्यान्सरको शंकामा डाक्टरले बालकलाई तुरुन्तै काठमाडौं लैजान सुझाए । ‘क्यान्सर शब्द सुन्नेबित्तिकै अब छोरा रहँदैन जस्तो लाग्यो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसै रात गाडी चढेर काठमाडौं हिँड्यौं ।’
महाराजगन्जस्थित कान्ति बाल अस्पतालमा बालकलाई रगतको क्यान्सर पहिचान भयो । अहिले कान्तिमै उनको उपचार भइरहेको छ । उपचारमा संलग्न डा. विष्णुरथ गिरीका अनुसार उनको स्वास्थ्य सुधारोन्मुख छ । अझै दुई वर्ष उनलाई उपचार आवश्यक पर्छ । सुर्खेतबाट महिनाको एकपटक उनलाई उपचारका लागि काठमाडौं ल्याउने गरिएको छ । ‘क्यान्सर लागिसकेको बच्चा बाँच्दैन भनेर घरबाट आउन दिँदैनन्,’ आमाले भनिन्, ‘तर बच्चा निको हुँदै गइरहेको छ, डाक्टरले भनेसम्म उपचार गराइरहन्छु ।’
अर्घाखाँचीकी एक बालिका उमेरले पाँच वर्ष पुग्दै छिन् । दुईपटक टाउकाको शल्यक्रिया भइसक्यो । देब्रे हात राम्ररी चल्दैन । खुट्टा पनि लुला छन् । ‘हात तल–माथि गर्नबाहेक देब्रे हातले त्यति भर दिँदैन,’ उनका बुबाले भने, ‘हामीले यादै गरेका थिएनौं । दुखेको पनि कहिल्यै थाहा भएन ।’ बालिकाका अभिभावकले नसाको समस्याले हात चलेन होला भन्ने अनुमान लगाए । उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, अन्नपूर्ण न्युरो, वीर अस्पतालसम्म पुगे । ‘टाउकोभित्र ट्युमर पलाएको पत्ता लाग्यो,’ उनले भने, ‘दुईचोटि अप्रेसन गर्दा पनि ट्युमर अझै बढ्न सक्छ भनेका छन् ।’ बालिका हाल कान्ति बाल अस्पतालमा उपचाररत छिन् । चिकित्सकका अनुसार उनको रोग ब्रेन क्यान्सरको हो । उपचारकै लागि एक वर्षदेखि उनका अभिभावक काठमाडौंमा बसेका छन् ।
यी दुईजस्तै कान्ति बाल अस्पतालमा अहिले ६ सय ५० क्यान्सर रोगका बालबालिका उपचारको सम्पर्कमा छन् । बाल क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. गिरीका अनुसार रोग पत्ता लाग्नेबित्तिकै उपचार गराउने हो भने निको हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । ‘क्यान्सर जनमानसले सोचेजस्तो भयानक र मृत्युसँग दाँज्नुपर्ने खालको छैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो देशमा एक त समयमा रोग पत्ता लाग्दैन, अर्को उपचार ढिलो हुने भएकाले मृत्युदर धेरै भएको हो ।’ रोग चाँडै पहिचान नहुनु, पहिचान भइहाले पनि उपचार ढिलो हुनु र उपचार नै नगर्ने परिपाटीले नेपालमा बाल क्यान्सर रोगको मृत्युदर विकसित मुलुकमा जसरी घट्न सकेको छैन । ‘बिरामी ढिलो पहिचान हुन्छन्,’ उनले भने, ‘कतिपय टेस्ट भारत लगेर गर्नुपर्छ जति ढिलो भयो उति मृत्युको जोखिम हुन्छ ।’
बालबालिकामा विशेषगरी रगतसँग सम्बन्धित (एलल) क्यान्सर बढी देखिन्छ । कान्तिमा उपचाररत ३५ प्रतिशत बालबालिकामा एलल नै देखिएको छ, जुन उपचार गर्दा निको हुन्छ । डा. गिरीका अनुसार बालबालिकामा देखिने ५५ प्रतिशत क्यान्सर रगतसँग सम्बन्धित छन् । यसबाहेक मिर्गौला, ब्रेन, न्युरो र आँखाको क्यान्सर पनि देखिन्छ । ‘शरीरमा डीएनए गडबडीका कारण बालबालिकामा क्यान्सर देखिन्छ तर यो वंशाणुगत होइन,’ उनले भने, ‘वंशाणुगत हो भन्ने भ्रमका कारण समाजमा बिरामीमाथि विभेद हुने गरेको छ ।’
उपचारको पहुँच नहुँदा क्यान्सरका बालबालिकालाई राजधानी नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ । फलोअपमा नआई कतिपय बिरामीले बीचैमा उपचार छाड्ने गरेको डा. गिरी बताउँछन् । ‘क्यान्सरको उपचारका लागि कम्तीमा तीन वर्ष नियमित फलोअप गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बिरामीपक्षलाई उपचारमा भन्दा पनि आउन–जान र खान–बस्न बढी खर्च गर्नुपर्ने स्थिति छ ।’ प्रदेश अस्पतालमा क्यान्सरको उपचार हुने व्यवस्था भए बाल क्यान्सरको मृत्युदर घटाउन सकिने उनले बताए । बालरोग विशेषज्ञ नर्सलाई क्यान्सर उपचारको आधारभूत तालिम मात्रै दिए पनि फलोअप उपचार सहज हुने उनको भनाइ छ । बिरामी डेढ सय रुपैयाँको इन्जेक्सन लिन पनि राजधानी नै धाउने गरेका छन् । कान्ति बाल अस्पतालको अगुवाइमा सातै प्रदेशका मुख्य अस्पतालका चिकित्सक र नर्सलाई क्यान्सरको तालिम दिने तयारी भइरहेको डा. गिरीले बताए ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले दक्षिण एसियाको जिन र वातावरण अध्ययन गर्दा नेपालमा बर्सेनि दुई हजारको हाराहारीमा क्यान्सरका बालबालिका पत्ता लाग्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सरकारले समुदायमा पुगेर बिरामी खोज्ने र उपचार गर्ने अभियान चाल्नुपर्ने बाल क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. सुधीर सापकोटाले बताए । ‘कान्ति बाल अस्पतालमा बर्सेनि दुई सय बालबालिका मात्रै उपचारमा आउँछन्,’ उनले भने, ‘२५ प्रतिशतभन्दा कम बच्चामा मात्रै क्यान्सर पत्ता लागेको छ ।’ भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल र भरतपुरको बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा बर्सेनि करिब तीन सय बिरामी मात्रै उपचारका लागि सम्पर्कमा आइरहेका छन् ।
प्रकाशित : माघ २१, २०७६ ०८:५५
नत्र भने सम्भावना भएका युवापंक्ति पनि कुनचाहिँं शीर्षमध्येको गुटमा लाग्दा कुन पद पाइएला भनी नापतौल गरेर भविष्यका लागि सानोतिनो पदको सुरक्षा गर्नतिर लाग्ने हो भने, महाधिवेशन उसका ‘सेयरहोल्डर’ का लागि मात्रै रुचिको विषय हुनेमा निश्चिन्त हुन सकिन्छ । सुन्दा योभन्दा अप्रिय र रिसउठ्दो अरू के होला ? तर त्यस्तो महाधिवेशनले पार्टीलाई अन्ततः डोर्‍याउने भनेको विघटनतर्फ नै हो ।
प्रकाशित : माघ २१, २०७६ ०८:५०